शेयर लगानीकर्ताको अधिकार हननको प्रश्न
नेपाली शेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताले चाहेमा जे पनि हुन्छ । दलाल कम्पनी ठूला लगानीकर्तासँग मिलेर विभिन्न घटनालाई अन्जाम दिन्छन् र कमाउँछन् भन्ने आरोप बारम्बार लाग्ने गर्छ । बजार घट्दा होस् वा बढ्दा “चलखेल भयो” भन्ने शब्द निकै प्रचलित छ हाम्रो शेयर बजारको सन्दर्भमा । असार १५ गते गत साताको अन्तिम दिनको कारोबार एकाएक बन्द भयो । लगानीकर्ता अन्योलमा परे के भएको हो धेरैले जानकारी पाएनन् । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा हेर्न र सुन्नमा व्यस्त धेरै लगानीकर्ताले शेयर बजार बन्द भएको पत्तो नै पाएनन् । शेयर दलाल कम्पनीलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयले २०६९ सालदेखिको कर तिर्न पत्र पठाएको विरोधमा दलालले बजार एकाएक बन्द गरेको भन्ने पत्तो लाग्यो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत दलाल कम्पनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने कुरा उल्लेख भएकोले कर कार्यालयले पत्र काटेको हो भन्ने कुरो आयो । दलाल आफूहरू पहिलेदेखिको कर तिर्न तयार नभएको, लगानीकर्ताबाट भ्याट नलिएको भन्नेजस्ता विभिन्न तर्कले बजार गर्मियो । दलाल व्यवसायीको बलियो सङ्गठन तीन पृष्ठ लामो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले कुनै हालतमा कर तिर्न नपर्ने जिकिर गर्न भ्याए । आफ्ना माग पूरा नभएको खण्डमा दलालहरूले बजार अनिश्चितकालीन बन्द गराउने हल्ला पनि चल्यो । शेयर बजार नै हल्लाको बजार भएकोले हल्ला चल्नु स्वाभाविक नै हो । तर यसै हल्लाको माँझ एक कुरा चाहिँ स्थापित र सावित भयो । त्यो के भने नेपालमा हरेक कुरा बन्द, हडताल, धम्की, घुर्की, थर्काई आदिले स्थापित हुन्छ त्यसका लागि सङ्गठनको आड लिएर कार्य गर्नुपर्छ जसको असर जसलाई जस्तो परोस वास्ता छैन भन्ने कुरा शेयर बजारमा सत्य साबित भएको छ । धितोपत्र दलालहरूको सङ्गठनले पनि त्यही कुरोलाई पुष्टि गरिदिएका छन् ।
नेपाली शेयर बजारमा जनताको सानो जावो २० खर्बको शेयर बजार त्यसमा पनि असारको मध्य समयको शेयर बजार लगानीकर्ताका अपठ्याराहरू कति होलान् भन्ने हेक्का नै नगरी हाल सञ्चालित ५० शेयर दलाल कम्पनीले बजार आफ्नो कब्जामा लिएकै हो । लामो समयदेखि लगानीकर्ताको आवाज न सरकारले सुनेको छ, न त नियमनकारी निकायहरूले सुनेका छन् भने अब दलाल कम्पनीले सुन्ने त कुरै भएन । कर कस्ले कति तिर्नुपर्ने हो त्यसको लेखाजोखा होला । नेपालमा एनसेल जस्तो कम्पनीको ठूलो कर प्रकरण त थाँती नै रहेको बेला दलाल कम्पनीले तिर्नुपर्ने वा नपर्ने करको हर हिसाब हुँदै गर्ला । तर एकाएक बजार बन्द गरेर लगानीकर्तामा अन्योलको वातावरण सिर्जना गर्ने अधिकार शेयर दलाल कम्पनीलाई कुन कानुनले दियो ? उनीहरूले जबदेखि शेयरको कारोबार सञ्चालन गरे तबदेखि कमाउने भनेको शेयर लगानीकर्ताबाट उठाएको कमिसन नै प्रमुख होइन र ? आज शेयर दलाल कम्पनीका मालिकहरू र त्यसको साझेदारहरू जुन उच्च आर्थिक हैसियतमा छन् त्यसको मुल जरो भनेको लगानीकर्ताले गर्ने खरिद बिक्री र उनीहरूबाट असुलिने कमिसन होइन र ? हो दलाल कम्पनीलाई मर्का परेको हुन सक्छ । कर बुझाउन नपर्ने, नमिल्ने, नचाहने जे जस्ता कुराहरू भए पनि बजार नै बन्द गरेर आफ्नो माग पूरा गराउन खोज्नु भनेको सरासर लगानीकर्ताप्रति अन्याय गर्नु हो । दलाल कम्पनीको यस्तो अमर्यादित, असान्दर्भिक, अस्वभाविक कार्यप्रति प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पन्छिनु र मौन बस्नु नियमनकारी निकायको अकर्मण्यता होइन र ?
लगानी कर्ता सङ्घले पनि बजार बन्द भएकोमा कडा आपत्ति जनाएको छ तर उनीहरूको आवाजलाई कुनै मूल्य दिइएको पाइएन । विगतमा पनि बजार सुधारका लागि अनलाइन टे«डिङलगायतका विविध विषयमा लगानीकर्ताले नियमनकारी निकायसँग बारम्बार चर्चा परिचर्चा नगरेको होइन तर विचरा लगानीकर्ता सङ्घको पदाधिकारीलाई चिया पिलाउने र आश्वासन दिनेबाहेक धेरै लगानीकर्ताको हितमा नियमनकारी निकायले खासै काम गरेको पाइँदैन । त्यसको मुख्यकारण लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठित भए तापनि उनीहरूको आर्थिक हैसियत खासै ठूलो नहुने तर दलाल व्यवसायीको सङ्गठनको भने आर्थिक हैसियत राम्रो भएको कारण पनि लगानीकर्ताको गुनासोले खासै महìव नपाएको तर्क कतिपय लगानीकर्ताकै रहेको पाइएको छ ।
यदि नियमनकारी निकायले लगानीकर्ताको हितमा कार्य गर्ने आँट देखाउने हो भने कारोबार बन्द गर्न पर्नाको कारण र त्यसको क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्थासहितको कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । लगानीकर्ताको आँखामा छारोहाल्ने कार्यले मात्र अब हुनेवाला छैन । त्यसको अतिरिक्त बजारमा निश्चित समूहको हालिमुहाली रोक्नका लागि दलाल कम्पनी थप्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दलालको अनुमति दिने, अनलाइन ट्रेडिङ छिटोभन्दा छिटो ल्याएर लगानीकर्ताको हितमा कार्य गर्न सक्नुपर्छ ।
असारको १५ हो र कतिपय लगानीकर्तालाई कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न शेयर बेच्नुपर्ने चटारोका बेला बजार एकाएक बन्द हुनुले लगानीकर्तालाई नाफा घाटा जे भए पनि उनीहरूको शेयर आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकारको उपभोग गर्ने अधिकारको हनन भएको छ । लगाीकर्ताहरू शेयर किन्दा बिक्री गर्दा कमिशन तिरेका छन् । पुँजीगत लाभकर पारदर्शी रूपमा तिरेका छन । नेपालमा शेयर क्षेत्रमा लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभकर जस्तो पारदर्शी कर प्रणाली कही कतै छैन दाबीका साथ भन्न सकिन्छ । भन्सार राजश्व होस् वा घरजग्गाको कारोबारमा समेत मूल्याङ्कन गरेर राज्यलाई कर तिर्दा कस्तो विधि अपनाइन्छ सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।
राज्यलाई पारदर्शी रूपमा कर तिर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कारोबार सञ्चालनमा योगदान दिने, नेप्से र सेवाको शुल्कसमेत इमानदारीपूर्वक तिरेर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको हक छिनिदा कस्ले बोल्ने ? त्यसउपर कस्तो रवैया हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
हाल शेयर बजारमा दलाल कम्पनीले बन्द गराएर बन्दी बनाएको प्रकरणलाई म लगानीकर्ताको हितमा अर्को एक प्रसङ्गसँग जोडन चाहन्छु । “विवाहका लागि दुल्हा आफ्नो दलबलसहित जन्त गएको रहेछ । जन्त गएको ठाउँमा दुलही कुनै अर्कै केटोसँग भागेको खबर प्राप्त भएछ । त्यसमा आक्रोसित बनेका दुल्हा र जन्त गएका उनको दलबल सबै मिलेर राजमार्ग जाम गराएछन् । माग चाहिँ उही दुलही चाहियो रे । ” नेपाली शेयर बजारमा लगानीकर्ता विचरा राजमार्गमा सफर गर्ने बनेका छन् । किन बन्द भयो थाहा छैन । गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने उसको अधिकार हनन् भएको छ । त्यसमा मल्हमपट्टी लगाउन काम कसले कसरी गर्छ हेर्न बाँकी छ । दलाल कम्पनीलेले त लगानीकर्तासँग क्षमायाचनासहित सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा लगानीकर्ता र दलालबीचको तिक्तता अझ बढने निश्चित छ ।
करको बाहनामा बन्द भएको बजार र आगामी दिनमा लगानीकर्ताले पनि भ्याट तिर्नुपर्ने हल्लाले बजारमा अस्थिरता पैदा गरेर बजारलाई घटाएर शेयर खरिद गर्दै नाफा कमाउने कुचक्र त होइन यो ? त्यसमा लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ । बजार सधँै चलिरहन्छ एक दिन बन्दले केही हुँदैन । “दि शो मस्ट गो अन” भन्ने कुराको हेक्का राख्दै लगानीकर्ताले संयमित देखाउँदै खरिद बिक्री गर्ने बेला हो यो ।